Somaliya, Waa Nalagu Dhax jiraa, Mana Ogin ee Ogaada (Prof Yahye Amir) -
HomeArimaha bulshadaSomaliya, Waa Nalagu Dhax jiraa, Mana Ogin ee Ogaada (Prof Yahye Amir)
Somaliya, Waa Nalagu Dhax jiraa, Mana Ogin ee Ogaada (Prof Yahye Amir)
October 20, 2021 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Somaliya, waa nalagu dhax jiraa, mana ogin
Jaamacadda Islaamiga ah ee Tel Aviv waxaa la asaasay 1956dii, Kuliyadda ugu muhimsan in kasta oo la yiraa Ardayda oo dhan waa loo ogolyahay, Dhab ahaan waxaa wax ka barta oo kaliya Ardayda Yuhuuda ah ee xiriirka la leh Sirdoonka Mossad.
Waxaa lagu bartaa, Culuumta la xiriirto Islaamka sida Caqiidada, Tafsiirka, Fiqiga, Axaadiithta, Axkaamta, Taariikhda, Luqadda Carabiga, oo loo barayo sida ey u rabaan yuhuudu, waxaa wax ka dhiga Macalimiin takhasus kaa leh, iyo kuwa Bartay Siyaasadda iyo Dhaqanka islaamka, hab dhaqanka Qofka islaamka ah iyo sida loo kala furfuri karo Muslimiinta, iyo Mabaadiida guud ee ah: Muslimiinta dhaxdooda isku mashquuli intii ey Adiga ku mashquuli lahaayeen.
ilaa 30,000 Arday ayaa dhigato, Ardaydaasi marka ey ka soo baxaan waxaa loo qeybiyaa Dunida iyaga oo xirfado kale ku shaqeysanaa, qaarkood waxaa loo furaa idaacado iyo TV-yo ka hadlo arrimaha islaamka.
Ardaydii ugu caansaneed Sannadahan waxaa ka mid ahaa, Imaamkii Masjidka Libiya Abu Xafsa oo Magaciisa Runtaana uu ahaa Binyamin Ifrayin, yahuudkaa oo meela badan ka soo shaqeeyay isaga oo wato Magacyo kala duwan, Kooxa Muslimiin ahna ku biiray una iftoo jiray si uu Muslimiinta u magac dilo.
Yuhuudii hore ee islaamka lagu soo dhax qariyay waxaa ugu Muhimsanaa Lorensa Arabo iyo Nin yuhuud ahaa oo ingriis sheeganayay oo la taliye mar u ahaa Boqorkii Sucuudiga ninkaa oo Cuthmaaniyiinta in la fogeeyo ka shaqeynayay.
Qorshihii wakhtigaa fog Muslimiinta loo dagay ee ahaa in dhxdooda khilaaf iyo colaad laga abuuro iyada oo loo Adeegsanayo isla Caqiidadooda Mirihiisii ayaan maanta guraneynaa.
Waxaa Jiro Madbacado lagu daabaco Kitaabka Qur’aanka, haddii aad fiiriso kitaabkaa suuradaha waxba lagama bedelin, Aayadaha waxba lagama bedelin, laakin Hal xaraf oo kaliya ayaa halkii shaqalkiisu uu ka ahaa kor dhaw, waxaa laga dhigaa Hoos dhaw, si Muslimiintu ey ugu murmaan oo khilaaf uu halkaa Shaqal uga bilaawdo.
Dhinaca kale CIA Mareykanka ka sokoow qeybaha kale ee Diinta, waxaa Xarunta CIA-da dhaxdeeda joogo 600 khabiir oo la baray Qur’aanka qiraa’addisa oo kaliya si ey shaki ugu dhax abuuraan muslimiinta, kuwa kale ayaa Axaadiithta barto.
Arintani mar dhaw sooma bilaaban, Bal Adiguba ila fiiri oo akhri Madaxweynihii hore ee Mareykanka Woodrow Wilson oo ahaa Madaxweynihii 28aad ee Mareykanka iyo taladiisii aheyd in la Abuuro “Inquiry’ experts” si loo dersiyo dhaqanka, Diinta iyo luuqadaha islaamka , fiiri oo akhri Go’aankii 1958 ee National Defence Education Act-NDEA.
Haddii aan u soo noqono wakhtiyadaan dhaw, 2002-2013 Miisaaniyadda lagu bixiyo Barashada sirdoonka la barayo Luqada Carabiga iyo Diinta waxaa la kordhiyay 200%. Waxaa CIA isticmaalaan “IVY league schools” si wax looga badalo Bariga dhexe.
Xuriyadda kadib Somaliya waxaa joogi jiray “peace corps” oo Dalka oo dhan ku firirsanaa, waxaad arkeeysay Tuulo ey ku nooshahay Hal Gabar oo kaliya oo Mareykan ah oo Macalimad ama dhakhtarad ah. waan hubaa waad Aragtay ama maqashay ” Somali Christian Cumunity” Bulshada Somalida kirishtaanka ah, ee iyana mala kulantay, Jaaliyadda Somalida Yuhuuda ah ee Somalia ku nool. wax hubso dhinacyadana iska fiiri.
wax badan oo qormadaan la xiriiro oo aan hore u akhriyay, halkaan kuma soo koobi karo ee yaana kugu dheereeyn, Adiguba wax badan waad ka akhrisay ama aad ka ogaataye.
Ogoow, Somaliya iyadana waa la darsiyay, waana naloo soo diray Dad Bulshada ka dhax Abuuro khilaaf Dhaqan iyo mid Diineed iyaga oo aan laftooduba ogeyn Cidda ey u shaqeynayaan.
FG: Arragtidaada Xur ayaad u tahay, wixii aan ka tagay ku dar, wixii aan khaldayna ka sax.